Knowledge | D Daily News
​​​ေ ​ြ သာ် လူတွေ လူတွေ ခက်လိုက်တာ
News Zin Zin - October 16, 2021 0
​​​ေ ​ြ သာ် လူတွေ လူတွေ ခက်လိုက်တာ ပုံထဲအမျိုးသမီးက ဘဏ်ရှေ့မှာလဲကျတယ်၊လဲကျပီးတာနဲ့ ဘာဆိုဘာမှမေးမရတော့ဘူး ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ ဘယ်သူမှချက်ခြင်း အနားမကပ်ရဲဘူး၊ ဘဏ်ရှေ့ကစစ်ဗိုလ်နဲ့ရဲတွေက အရေးပေါ်ကားနဲ့နယ်မြေရဲ လှမ်းအကြောင်းကြား အဲ့ထိလဲလှုပ်ကိုမလှုပ်ဘူးဟု ပြောပြ၊ပရဟိတအရေးပေါ်ကားရော နယ်မြေရဲရော ရောက်လာမှလုပ်စားနေမှန်းသိရ၊ ဟိုတနေ့ကလည်း သူကိုဆေးရုံပို့ပေးရသေး ဘာမှမဟုတ်တော့လမ်းစရိတ်ပေးပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလဲ နောက်ရပ်ကွက် တခြုပီးတစ်ခု လုပ်စားနေတုန်းဟု သိရ၊ သတိထားကြဖို့ပါ...
တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မခံစားနိုင်တော့လို့ ဖွင့်ချလိုက်ပြီ
Local News Zin Zin - October 16, 2021 0
တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မခံစားနိုင်တော့လို့ ဖွင့်ချလိုက်ပြီ အစအဆုံးသေချာနားထောင်ကြည့် အောက်ဆုံးတွင်videoပါသည်...... Zawgyi Version ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မခံစားႏိုင္ေတာ့လို႔ ဖြင့္ခ်လိုက္ၿပီ အစအဆုံးေသခ်ာနားေထာင္ၾကည့္ ေအာက္ဆုံးတြင္videoပါသည္...... Videoၾကည့္ရန္.....
ကသာမြို့နယ်က အင်းရွာရဲစခန်းရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ
ကသာမြို့နယ်က အင်းရွာရဲစခန်းရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကသာမြို့နယ်နဲ့ ၇ မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ အင်းရွာကျေးရွာ ရဲစခန်း အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် ည ၁၀ နာရီဝန်းကျင်က ဝင်ရောက် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ကသာမြို့နယ်ထဲက တိုက်နယ်ရဲစခန်းတွေမှာ နေ့ပိုင်း ကင်းစောင့်ထားပြီး ညပိုင်း ကသာမြို့မရဲစ ခန်းမှာသာ...
D Daily News is celebrity news, singer news, movies, entertainment, lifestyle, music, fashion, and gossip website. We provide you with the latest celebrity news and videos straight from the entertainment industry
© Copyright © 2021, Celebrity Zone. All rights reserved. Designed by WFM